शहिद गँगालाल हृदय केन्द्र अब जनकपुरमै, मधेशवासीको लागि संजीवनी
जनकपुरधााममै उक्त केन्द्र स्थापना भएपछि मधेशवासीको लागि संजीवनी भएको बताइन्छ ।
९ श्रावण, २०७६ || प्रकाशित १४:३३:००
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । काठमान्डौं स्थित रहेको शहिद गँगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको शाखा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुरमा पनि स्थापना गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका उप प्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सो शाखालाई एक समारोहबीच उदघाटन गरेका छन् । मुटु रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारको लागि राजधानी धाउनुपर्ने झन्झट र बाध्यतालाई हटाउँदै जनकपुरमै केन्द्र स्थापना भएपछि मधेशवासीहरुको लागि सहज भएको छ ।
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका प्रमुख डा. ज्योतीन्द्र शर्माको अध्यक्षता तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री यादवकै प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न एक समारोहबीच बोल्दै यादवले उक्त अस्पताल प्रदेश नं. २ को लागि प्रादेशिक शाखाको रुपमा रहेको बताए । उनले भने, अब यस भेगका जनताले जनकपुरधाममै मुटु सम्बन्धि समस्याहरुको उपचार पाउन सहज हुने भएको छ ।
सो समारोहमा हृदयरोग र हृदय रोग केन्दै्र (अस्पताल) को बारेमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रकाश पारेका थिए । समारोहमा प्रमुख डा. ज्योतीन्द्र शर्मा , सिनियर अफिसर राम आचार्य , सम्पुर्ण चिकित्सकहरुको टिम समेत उपस्थित भएका थिए । जनकपुरधााममै उक्त केन्द्र स्थापना भएपछि मधेशवासीको लागि संजीवनी भएको बताइन्छ ।